PlexEarth Tools 2.0 Beta azo alaina - Geofumadas
Indray andro izay Niresaka tamin'izy ireo aho ny novolavolaina izay hitondra ny versione 2.0 amin'ny PlexEarth Tools for AutoCAD, iray amin'ireo fampivoarana azo tsapain-tanana indrindra hitako tao amin'ny Google Earth avy amin'ny mpikambana ao amin'ny AutoDesk Developer Network (ADN). Androany dia navotsotra ny doka Beta, Afaka maka download ianao, fitsapana ary ny zava-dehibe amin'ireto dingana ireto: tatitra azo atao bibikely.
Inona ny vaovao amin'ity dika ity
Mahaliana fa maimaimpoana ity kinova Beta ity raha mivoaka ny kinova ara-barotra, -Araka ny nolazaina tamiko- tamin'ny voalohan'ny volana Jona 2010. Izay matory dia tsy ho afaka misintona azy.
Ny tsara indrindra raha ampitahaina amin'izay hitako andro vitsy lasa izay: Izao dia misy amin'ny teny Espaniôla sy amin'ny fiteny hafa tohanan'ny AutoCAD toy ny:
Mazava ho azy, ity kinova ity dia tsy mandeha amin'ny AutoCAD 2009 na taloha, fa amin'ny 2010 sy 2011. Miasa amin'ny:
AutoCAD® Architecture 2010-2011Vidiny sy fahazoan-dalanaTsy haiko ny vidin'ny fahazoan-dàlana, ho fantatray izany hatramin'ny Jona. Ny fantatro dia tsy hisy karazana fahazoan-dàlana iray fotsiny, fa Pro sy Premium iray no horaisina, izay toa tsara amiko raha mampidina ny vidiny. Nampahafantarin'ny iray tamin'ireo mpamorona azy koa aho fa hanome fihenam-bidy manokana ho an'ireo izay misintona ny kinova Beta sy misoratra anarana azy.
The Pro version: Anisan'izany ny endriky ny fifandraisana amin'ny sary Google Earth, zavatra izay tsy nahitako fampiharana hafa hatramin'izao:
Mamoròna sary môsika iray, na ho an'ny faritra rectangular, ao anaty polygon na amin'ny lalana iray.
Ampidiro ny sary ho toy ny singa tsirairay, amin'ny fanitarana tranonkala manokana.
Afindra amin'ny sary eto AutoCAD ny Google Earth.
Sokafy zavatra any amin'ny Google Earth.
Manintona avy amin'ireo teboka AutoCAD, polygones na làlana izay manana Google Earth eo afovoany.
Mijoroa mivantana ao amin'ny Google Earth, miaraka amin'ny safidy maika, haka ny dwg.
Mahavariana ahy ny fampiharana ity version ity, satria azo atao ny maka sary ao amin'ny mozika na koa mifototra amin'ny polygon.
El lahatsary navoaka tao amin'ny Yutube Tena azo ampiharina izy io, mampiseho koa ny fomba ahafahanao misintona raster amin'ny làlan'ny mozika na koa amin'ny lalana (lalana).
Ny Premium Premium: Amin'izany, ny fonosana nomerika nomerika dia azo ampiana, na dia miaraka amin'ny dikan-teny fototra amin'ny AutoCAD aza, ny PlexEarth Tools dia manampy ireo asany izay tsy azo atao afa-tsy amin'ny Civil3D.
Ampidino ny teboka sy ny teboka (contour lines)
Amboary ny sehatra, izany avy amin'ny teboka, teboka na soratra avoakany.
Famaritana ny habetsaky ny sisin-tany
Fehiny mifandraika, toy ny ao amin'ny Civil3D
Manendreha toerana ambony ary mamorona 3D polylines amin'ny lalana iray.
Ny mari-pamantarana ny mari-pahaizana, ny habe na ny habaka.
Izy io koa dia manana fitaovana hamakiana ny havoana na ny fampahalalana avoakany, ary koa ny faritra na ny faratampony.
Samy afaka misintona avy any amin'ny Google Earth, na miaraka amin'ny programa hafa, toy ny Civil3D, ireo rindrina ireo.
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny news from PlexEarth 2.5
Previous Post«Previous PowerCivil ho an'i Amerika Latina, fahatsapana voalohany
Next Post Fitsapana ny station Station Sokkia SET 630RKmanaraka »
4 mamaly ny "PlexEarth Tools 2.0 Beta Azo alaina"
Juan Carlos Pineda hoy izy:
Fanomezana goavana, indrindra ho an'ny fanadihadiana mialoha
Eny ary, tonga amin'ny manual-nao. Na dia dikan-tsarimihetsika Beta aza anefa dia mbola tsy hita ilay farany
José hoy izy:
Hisy fitaovana azo ampiasaina amin'io fitaovana io
Azo ampiasaina ihany koa ny beta ho an'ny bitsika AutoCAD 2010 sy 2011 64.